बिहीबार कुन–कुन राशिका लागि शुभ ? हेर्नुहाेस् आजकाे तपाइकाे भाग्य । – Jagaran Nepal
बिहीबार कुन–कुन राशिका लागि शुभ ? हेर्नुहाेस् आजकाे तपाइकाे भाग्य ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) बिद्यार्थीहरुले पढाइ लेखाइमा राम्रो नतिजा ल्याई पुरस्कार जित्न सक्नेछन् । प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने दाम्पत्य जीवन सुखी रहनेछ । सुख दुखमा साथ दिनेहरु भेटिने हुदा मन प्रशन्न रहनेछ । मध्यान्हबाट समय मध्ययम रहेकोले काम वा अध्ययनको शिलशिलामा विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ भने सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुहोला ।तपाईँ दिन शुभ रहोस् ।